မြန်မာနိုင်ငံသားများ လိုက်ပါလာသည့် နှစ်ထပ်ကား မဲဆောက်မြို့ အ၀င်မှာ မီးလောင်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်…
June 30, 2019 Thuta Star 0
မြန်မာနိုင်ငံသားများလိုက်ပါလာသည့် နှစ်ထပ်ကား မဲဆောက်မြို့ အ၀င်မှာ မီးလောင်နေတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု လူမှုကွန်ယက်ပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့လာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရ ဒီနေ့ June 30,2019 ညနေပိုင်းအချိန်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း နှင့် ကားပေါ်လိုက်ပါလာသူများ အသက်ဘေးမှလွတ်မြောက်ကြကြောင်းလည်း ကြားသိရပါသည်။ ဒီကနေ့ ညနေပိုင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း နရ သီဝ ခရိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ကနေ […]
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတစ်ယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်အူဝဲတောင်းဆို….
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိခင်တွေထဲကတယောက်မို့ သက်ငယ်မုဒိမ်းတရားဥပဒေစိုးမိုးစေရန် အကြီးအကဲများကိုတောင်းဆိုလိုက်တဲ့ အူဝဲ အူဝဲဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အအောင်မြင်ဆုံးပရိတ်သတ်အများဆုံးမင်းသမီးတလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ အပြင်သူမဟာသမီးလေးတယောက်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှမိခင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ မှာတော့သူမကသက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကိုပြင်းထန်စွာအပြစ်ပေးရန်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားလိုက်ပါတယ်။ အူဝဲရေးသားချက်ကတော့”သမီးတယောက်ရဲ့ အမေအဖြစ်ရှိနေတဲ့ အူဝဲအတွက်တော့ အရမ်းခံစားရတယ်အမှုမှန် အမြန်ပေါ်ပေါက်ပါစေမြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေပိုမိုစိုးမိုးလာရန်ပြည်သူတွေတရားဥပဒေကိုပိုမိုယုံကြည်​ လေးစားလိုက်နာလာရန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတွင် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကနေပြည်တော်က ကလေးမုဒိမ်းမှု၏တရားခံအစစ် ကိုမပျက်မကွက်ဖော်ထုတ်ပေးပါရန်ပြည်သူများကလေးစားစွာတောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။#JusticeForVictoriaဆိုပီးရေးသားထားပါတယ် ပရိတ်သတ်ကြီးလဲတူတူပူပေါင်းကူညီမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် အမှုမှန်ပေါ်ပါစေ မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအေးချမ်းပါစေ။ဖတ်ရှူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ Crd.Celepublic.com
ကိုယ့်မိသားစုကိုကာကွယ်ပါ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းပါ ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် မယ်​လိုဒီ….
လတ်​တ​လော လူမှုကွန်​ယက်​မှာ နာမည်​ကြီး​နေတဲ့ ၂ နှစ်​အရွယ်​ သမီး​လေး မုဒိန်းကျင့်​ခံရတဲ့ ကိစ္စနဲ့ပတ်​သတ်​ပြီး မြန်​မာ ပြည်​သူ၊ ပြည်​သား​တွေ​အကုန်​လုံး စိတ်​မ​ကောင်းဖြစ်​​နေကြတာပါ။ ပြည်​သူတစ်​ဦးတဖြစ်​လဲ သရုပ်​​ဆောင်​ မယ်​လိုဒီကလည်း သမီး​လေး Victoria အတွက်​ သူမရဲ့ခံစားချက်​ကို ထုတ်​​ပြောလာတာ ​တွေ့ရပါတယ်​။ မယ်​လိုဒီက​တော့ ကိုယ့်​မိသားစုသာဆိုရင်​ ဆိုပြီး ကိုယ်​ချင်းစာတရားအပြည့်​ရှိကြဖို့ကိုလည်း […]
အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး သေဆုံး …
အမြန်လမ်းတွင် နွားလှည်းနဲ့ Express တိုက် နွားလှည်းမှ မောင်နှမ နှစ်ဦးလုံး အခင်းဖြစ်နေရာတွင် သေဆုံး ဇွန်လ(၃၀)ရက်​​နေ့ နံနက်(၀၅၃၀)နာရီအချိန်​ နေပြည်​​တော်​-မန္တလေး လမ်း မိုင်တိုင် ၂၇၂/၇ အနီး တွင် ယာဉ်​​မောင်းဦးမြင့်​​ကျော်​၊ (၅၀)နှစ်​၊ မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်​အမှတ်​ MDY 5M/—-ကောင်းမြတ်​မန်း express ခရီးသည်​တင်​ယာဉ်​သည်​ […]
ပေ့အတု အကောင့်အတုတွေနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ပြောပြီ….
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀ လောက်ကတည်းက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီး တယောက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူး။ မင်းသမီး အိန္ဒြာကျော်ဇင် ကတော့ သူ့အနုပညာ သက်တမ်း တလျှောက်မှာတော့ အောင်မြင်တဲ့ ကားကောင်းများစွာ ရိုက်ခဲ့သလို သူရိုက်ခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်း […]
ယောက်ျားလေးတွေ မသိနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးတို့ အတွင်းစိတ်…
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အပြုအမှု တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သင့်ဘေးနားမှာ ဘာအကြောင်းမှ မရှိဘဲ ပေကပ်ကပ် ရပ်နေတဲ့ အပြုအမူပါ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေ၊ စကားတွေက အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရ ခက်ခဲလှပါတယ် မိန်းကလေးတွေရဲ့ အတွင်းစိတ် သဘောက ထူးဆန်းလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ ရှိနေရင် […]
နှင်းနုလွင် မိဘများနှင့် သူမ၏ဆွေမျိုးများသိစေရန်…
နေပြည်တော်မူကြိုကျောင်းမှ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးငယ်လေးရဲ့အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်စေဖို့ အဓိက သက်သေ နှင်းနုလွင် နှင်းနုလွင် မိဘများနှင့် သူမ၏ဆွေမျိုးများသိစေရန်။ (Wisdom hill ကျော်င်းပိုင်ရှင် ၏ အမ ဖြစ်သူ Thiri May ကိုယ်တိုင် နှင်းနု လို့တရားဝင်ပို့စ်တင်မှ ကျနော်က ပုံတင်တာပါနော်။ စည်းရှိပါတယ်။) မိဘများခင်ဗျာ ခင်ဗျားတို့သမီးရဲ့ […]
သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်း ဥပဒေကြမ်း သမ္မတအတည်ပြုလိုက်ပြီ
သက်ငယ် မုဒိမ်းမှု ထောင်ဒဏ် တစ်သက် တစ်ကျွန်း ဥပဒေကြမ်း သမ္မတအတည်ပြုလိုက်ပြီ သက်ငယ်မုဒိမ်းကျူးလွန် သူများကို ထောင်ဒဏ်တစ်သက် (ထောင်ထဲတွင် သေသည်အထိ နေရမည်)အထိ ချမှတ်နိုင်မည့် ရာဇသတ်ကြီးအား ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်း ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်း မြင့်က လက်မှတ်ရေးထိုးအတည် ပြုသည်။ မတ်လ […]
အိမ်​​ထောင်​ပျက်​တဲ့ဒဏ်​​ကြောင့်​ စိတ်​ဓာတ်​ကျခြင်း​​​ခံစား​နေရတဲ့ ​ဆောင်း​ဟေကို….
စိတ်​ထိခိုက်​စရာသတင်းတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ မင်းသမီး ​ဆောင်း​ဟေကိုရဲ့ လတ်​​တ​လော အိမ်​​​ထောင်​​ရေး​သောကမီးဟာ အခုအချိန်​မှသာ ပရိသတ်​​တွေသိရှိခွင့်​ရခဲ့​ပေမယ့်​ အိမ်​​ထောင်​​ရေးဘဝမှာ ဘယ်​လိုအချိန်ကတည်းက ဘယ်လိုအခက်​အခဲ​ပြသနာ​တွေနဲ့ လှိုက်စား​​နေခဲ့သလဲ ဆိုတာ ကာယကံရှင်​​တွေကလွဲပြီးဘယ်​သူမှအတိအကျမသိရှိနိုင်​ပါဘူး။ လက်​ရှိအချိန်​ မင်းသား ​ဆောင်​ဂျုံကီနဲ့ အိမ်​​ထောင်​ကွဲရအဖြစ်​ကို လူသိရှင်​ကြားဖြစ်​​စေခဲ့ပြီး​နောက်​ပိုင်း စိတ်​ဒုက္ခနဲ့ ဖိစီးမှုဒဏ်​ ကြုံ​တွေ့ခံစား​နေရတဲ့ မင်းသမီးဟာ စိတ်​​ရောရုပ်​ပိုင်းပါ ထိခိုက်​ကျဆင်းပြီး ကိုယ်​အ​လေးချိန်​ […]
က​လေး​တွေချည်း ဒုက္ခ​ရောက်​​နေတဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ အ​ကြောင်းကို ဒဲ့​ပြောလိုက်​တဲ့ ​တေး​ရေး ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​
တစ်​​နေ့တစ်​ခြား နားနဲ့မဆံ့​​အောင်​ ​ကြား​နေရတဲ့ သက်​ငယ်​မုဒိန်းမှု​တွေက လတ်​တ​လော မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ ပြည်​သူလူထု​တွေကြားမှာ ရင်​နင့်​​အောင်​ မြင်ေ​တွ့​နေရတာပါ ။ အဆိုပါအ​ကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်​သတ်​ပြီး​တော့ အနုပညာရှင်​​တွေများစွာကလည်း အမှုမှန်​​ပေါ်​ပေါက်​ဖို့ ကြိုးစားပြီး လှုံ့​ဆော်​​ပေး​နေကြတာ ​တွေ့ရပါတယ်​​​။ လတ်​တ​လောမှာလည်း ​တေး​ရေး ​ရွှေ​ဂျော်​​ဂျော်​က​ က​လေး​တွေချည်း ဒုက္ခ​ရောက်​​နေတဲ့ မြန်​မာနိုင်​ငံရဲ့ အ​ကြောင်းကို ဒဲ့​ပြောလာတာ […]